စိတ်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | Mg Ogga's Notes
စိတ္တေနနီယတိလောကော၊စိတ္တေန ပရိကဿိ။စိတ္တေဿ ဧကဓမ္မဿသဗ္ဗ၀ ၀သံအနွဂူတိ။ ၃ (သံယုတ္တနိကာယ် ၁၊၃၉)
ဒီိဂါထာ လေးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း နားယဉ်နေပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ “စိတ်သည်လောကကိုဆောင်၏ စိတ်ဖြင့်လောကကိုဆွဲငင်၏။စိတ်၏အလိုသို. အရာအားလုံး အစဉ်လိုက်၏။” လူသမိုင်းတလျှောက်မှာ လူတွေရဲ့ကူးအကြံတွေ အသိမြင်တွေမြင်မားလာမှုနဲ့ အတူကမ္ဘာမြေ မျက်နှာပြင်ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ပြောင်းလဲပစ်တယ်ဆိုတာကို လူယဉ်ကျေးမှုထွန်သစ် ကာစကာလမှာ သဘာဝတရားဟာ အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနဲ့ ရှိနေပါသေးတယ်။နေက်ပိုင်း စိုက်ပျိုးတတ်လာတဲ့ အခြေအနေရောက်တော့ ဆည်တွေဆောက် မြောင်းတွေဖောက် လုပ်ပြီးသဘာဝတရားဟာ ပြုပြင်စီရင် စခံရတာပါပဲ။နောက်စက်မှုတော်လှန်ရေး အပြီး မှာ အရင်းရှင်ဝါဒပေါ်ပေါက်လာပြီး သဘာဝသံယံဇာတအရင်းအမြစ်တွေကို အလွန်ကျွံထုတ်သုံးကျ တော့တယ်။ အဒမ်စမစ် ကလည်း များများထုတ်များများရောင်း မြန်မြန်စိပွားရေးတတ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီတွေ ခေတ်စားတဲ့ကာလပေါ့။အင်္ဂလိပ်နဲ့တခြားနယ်ချဲ့နိုင်ငံတွေက ကိုလိုနီပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီက ကုန်ကြမ်း တွေယူပြီ ကုန်ချောထုတ်ပြီး ကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဆီပြန်ရောင်း တော့အရမ်းကို အဆင်ပြေကြတယ်။ စီပွားရေးကိန်းဂဏန်းအရ တိုးတတ်တယ်ပေါ့။ဆုပ်ယုတ်လာတတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပါ။နောက်ပိုင်း နျူကလီးကာခေတ်၊အာကာသခေတ်၊IT ခေတ်ပေါ့ နည်းပညာတွေ ကုန်ပစ္စည်းတွေ တိုးတတ်လာပေမဲ့ လူသားတွေရဲ့ဦးနှောက်ဟာ လူစိတ်နှလုံးသားကို နဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတွေ ကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး ဖွံဖြိုးကြီးထွားလာခဲ့တယ်။ အသိဥာဏ်အကြီးဆုံးသတ္တ၀ါ လူသားတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းတိုးတတ်မှုမှာတော့ ဧရာမ တကယ်လူသန်ကြီးအသီးဖြစ်ပေမယ့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ပိန်လှီသေးကွေးတဲ့သတစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီး။ ဒီလိုနမ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ခြံမှုတွေ တွေကြောင့် ပြိုင်နှိုင်းလို.မရတဲ့ ညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် လာအောင် လူရဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ သဘာဝတရားရဲ့ သန့်စင်မှု၊အသစ်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို ပိတ်ပင်တားစီးရာရောက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓပိဋိကတ်တော်ထဲက သုတ်တွေတော်တော်များများဟာ လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ယိုယွင်း ပျက်ပြားမှု အချုပ်အတည်းမရှိ ပွားလာတဲ့အခါ လူသားခန္ဓကိုယ်နဲ့ လူပတ်ဝန်းကျင် ကိုဘေးဥပဒ်သင်စေ တယ်လို. အဂ္ဂညသုတ်မှာလာ တဲ့ေ၇ှးအဖြစ်ပျက်တွေ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးလာတာနဲ့ လူဥပဓိရုပ်ဟာ တင်တယ်လှပမှုတွေ ယုတ်လျောလာပြီး သဘာဝအစာအာဟာရအရင်းမြစ်တွေကုန်သုဉ်သွားစေတယ်လို. ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျင်ဝတ်သိစိတ် လူအသိစိတ်ဓာတ်ဟာ လူခန္ဓာကိုယ်၊ဒေသအလိုက် တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ သဘာဝပေါက်ပင်တွေ အားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လောကကြီးနဲ့အပြန်အလှန် ရစ်ပတ်နွယ်ယှက်နေပြီး တုံပြန်တတ်တဲ့ ဂေဟစနစ်ကြီး အဖြစ်ထင်ရှားစေပါ့တယ်ဗျာ။လူနဲ့သဘာဝတရားတွေ အပြန်အလှန်မှီခို နေတာကို ပဉ္စနိယာမဓမ္မဆိုပြီး အဋ္ဌကထာကျမ်းတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အနောက်တိုင်း ကပေါ်လာတဲ့ Ecology တတ်အများကြီးစောပါတယ်။ရူပနိယာမ=physical law(ဥတုနိယာမ)၊ဇီဝနိယာမ= Biological law(ဗီဇနိယာမ)၊စိတ္တနိယာမ=psychological law၊ကမ္မနိယာမ=moral law၊ဓမ္မနိယာမ= causal law တွေဟာ အချင်းချင်း ဆက်နွယ်နေပြီ လူတွေဟာ သူလုပ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းရှပ်ပိုင်းဆောင်ရွယ်မှု တွေ ပပ၌ပ္ပ္ပ္ပ္ပပေါ်မှုတည်ပြီး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို ခ့စားရတယ်။သုစရိုက်စွမ်းအင်တွေ များပြားရင် လောကကြီးဟာ သာယာပြီး ဒုစရိုက်စွမ်းအင်တွေများပြားရင် လောကသဘာဝတရားကြီးရဲ့ ဒဏ် ခပ်ခြင်းကိုခံရမှာ မလွဲပါဘူး။
အခုဖြစ်ပျက်နေတာကိုပဲ ကြည့်ကြည်ပါ ရာဇ၀တ်မှု အကြမ်းဖတ်မှု စစ်ပွဲ အစုလိုက်သေစေတဲ့ လက်နက် တွေ အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်နေဝြကတာပဲ ဒါသာယာနာပျော်ဖွယ်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။လူသား မျိုးနွယ်တွေ ဟာ ဒေါသ၊လောဘ၊မောဟတရားတွေရဲ့ လက်ခုပ်ထဲ သက်ဆင်းမ်ိတော့ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်၊ သတ္တန္တရကပ်၊ရောဂန္တရကပ် တွေနဲ့ ကြုံတွေနေရတာ မျက်မြင်ပါပဲ။
လူစိတ်နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆက်စပ်မှုရှိတာကို သိပ္ဗံနည်းကျစမ်းသပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ အပင်အုပ်စုနှစ်ခုကို ရေ၊နေရောင်ခြည်နဲ့မြောသဇာအညီအမျှပေးပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဆူပှုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထားကြည်တော့ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွင်ပြီး သူတော်ကောင်းများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကသစ်ပင်တွေဟာ စိမ်းလန်းစိုပြေပြီးပိုမို ရှင်သန်ကြီးထွားကြတယ်။ဆူပှုပြီးရုန်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အပင်တွေကြတော့ ညှိးရော်သွားကြတယ်။(မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါ)
ဒါဘာဖြစ်လိုလည်းဆိုတော့ စိတ်ညစ်နူးတဲ့အခါ၊ အမျက်ထွက်မှုနဲ့ကြောက်ရွှံတဲ့ အခါ၊ အပျက်သဘော ဆောင်တဲ့ စိတ်နှလုံးထိခိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်နှက်နေတဲ့ အခါမှာ အင်ဒိုကရိုင်းအကျိတ်ရဲ့ စိမ့် ထုတ်ရည်တွေ ဆီကသွေးထဲထဲပေါင်းထည့်ပေးတဲ့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိတွေ ကိုလည်ပတ်စီးဆင်းနေတဲ့သွေးထကြနေစုပ်ယူထားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြောက်များလှတဲ့ လူထုကြီးဆီက ဒီလိုစိတ်အပြုအမှုတွေ အဆိပ်တောက်တွေကို အသကရှူထုတ်လုက်ရင်း ဒလဟော သွန်းထုတ်ကြတဲ့အခါ လေထုကြီးဟာ သိမ့်သိမ့်မွေမွေညစ်ညမ်းလာပါတယ်။ စက်ရုံတွေ ဓာတုပစ္စည်း CO2နဲ့ CFCဓာတ်ငွေ့တွေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ဟာညစ်ညမ်း လူမှစွန့်ထုတ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အညစ်ကြေးတွေကြောင့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကညစ်ညမ်းနဲ့တကယ်ပဲ ပျက်စီးလာပါပြီဗျာ။
စက်ယန္တရားတွေရဲ့ထုတနလုပ်မှုနဲ့ သဘာဝသံယံဇာတတွေကို နင်းကန်သုံးစွဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ တဲ့ ရုပ်ပိုင်ညစ်ညမ်းမှုဟာ ကာမဂုဏ်စည်းစမ်ဥစ္စာဓနနဲ့ သြဇာအာဏာတို့အပေါ် အာသာငမ်းငမ်းရှိလှတဲ့ လူလောဘတရားတွေ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဟာ တကယ်တော့ လူတွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းနာမ်စိတ် ညစ်ညမ်းမှုရဲ့ အပြင်ပိုင်းပြယုဒ်တခုသာဖြစ်ပါတော့တယ်။
Reference:Prof:Lily de Silva ၏ Vipassana Its Relevance to the Present Worldအမည်ရှိ နိုင်ငံတကာနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှာ ဖတ်ကြားသွာသောစာတမ်းကို ဘက္ခုသုဓမ္မ(EDP)ဘာသာပြန်ဆိုချက် ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊အမှတ်(၂၅)၊ဇူလိုင်လ၊၂၀၀၉၊နှာ၂၀၂-၂၀၆ ကိုမှီငြမ်းပါတယ်။
August 31, 2009 in ဘာသာရေးရာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ. Tags: ecology
One thought on “စိတ်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်”
အရမ်းကောင်းတဲ့ပိုစ်လေးပါ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းတာကို စိတ်ညစ်ညမ်းတာနဲ့ပြသွားတာ စဉ်စားစရာအသစ်တွေရစေတယ်ကျေးဇူးပါ ကိုဥဂ္ဂါရေ